bikefriendly Archives | တစ်ဦးကရထား Save
tag ကို: bikefriendly
နေအိမ် > bikefriendly
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့စက်ဘီးဂီယာထွက်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့်နေဆဲသာယာလှပစက်ဘီးစီးလမ်းကြောင်းခံစားရက်အနည်းငယ်ဟုတ်မဟုတ်, သို့မဟုတ်ရောမမြို့မှ Canterbury တစ်ဦးထံမှမော်ကွန်း 1,800km စီးနင်း, ကျွန်တော်တို့၏5ဥရောပမှာတော့ခရီးသွားဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးစက်ဘီးလမ်းကြောင်းသင်လာအောင်နှိုးဆွပါလိမ့်မယ်! This article was written…
သင်သည်တာရှည်ဥရောပရဲ့မဖြစ်မနေ-အလည်အပတ်ခရီးစဉ်အချို့ကိုကြည့်ဖို့လိုလျှင်, အများဆုံးစက်ဘီးဖော်ရွေမြို့ကြီးများ၏အနည်းငယ်ဧကန်အမှန်အသင့်ရဲ့စာရင်းစေမည်. ဤရွေ့ကားမြို့ရွာတို့ဆိုင်ကယ်အားဖြင့်စူးစမ်းဖို့အကြီးအများမှာ, ဘတ်ဂျက်အပေါ်ခရီးသွားလာအဘို့ထိုသူတို့စံပြအောင်. And you can get there by…